Shariif Xasan oo Al-shabaab kusoo jeediyay deegaannada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Shariif Xasan oo Al-shabaab kusoo jeediyay deegaannada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa Al-shabaab kusoo jeediyay deegaannada uu ka arrimiyo maamulkaasi, kadib dalab dhib ku ah Al-shabaab oo uu dhawaantaan u jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.
Shariif Xasan ayaa sheegay in dowladda Farmaajo kaliya ay ka doonayaan inay la dagaallamaan Al-shabaab, islamarkaana sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku furaan dhammaan waddooyinka ay maleeshiyadu xiratay.
Sidoo kale, wuxuu Shariif Xasan sheegay in shacabka Koonfur Galbeed ay doonayaan inay arkaan Muqdisho iyo Baydhabo oo dadka oo dhan isku dhex-mari karaan, Al-shabaabna laga xorreeyay deegannadaasi.
Shariif Xasan ayaa dhinaca kale tilmaamay in waxa kaliya ee niyadooda ku qaboobi karto inay tahay Al-shabaab oo laga saaro deegaannada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Hadaba hadalladaan uu sheegay Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa waxay Al-shabaab kusoo jeedin kartaa deegaannada Koonfur Galbeed Soomaaliya, sidoo kalena waxay xoojin karaan weerarada ka dhan ah maamulka uu isaga madaxweynaha ka yahay.